बुद्ध नेपालमा जन्म्या हुन्
२५६२ बुद्धजयन्ती विविध कार्यक्रम गरी देश विदेशमा धुमधाम साथ मनाइएको छ। वृद्धदेखि भर्खर टुकुटुकु हिँड्ने बाल–बच्चाले समेत आ–आफ्नै ढंगमा बुद्ध जयन्ती सुने/बुझे। धेरै बाक्लो चहल–पहल छ रे भन्ने सुनेपछि धरहराले
गत मंसिरमा सम्पन्न भएको केन्द्र र प्रदेश निर्वाचनको समिक्षा ग¥या ग¥यै छ । निर्वाचनमा लज्जापद रुपमा काँग्रेस पराजित भएको घामझैं छलङ्ग छ, काँग्रेस पदाधिकारी अझै कारण खोजिरहेका छन् । घरको
मगाऔं वाइन र ग्लास
आणविक हतियार, क्षेप्यास्त्र र अन्य खै के–के हतियार परीक्षण गरेर उत्तर कोरियाले संसारलाई थर्कमान बनाएको छ। संसारकै सर्वशक्तिमान मानिएको अमेरिकासमेत सो मुलुकको विरोध गर्न आँट गरिहाल्दैन। तर अब उत्तर कोरिया
बहिनी किम यो जोङको कमाल
दुई कोरियाबीच शुक्रबार भएको ऐतिहासिक शिखर वार्ताले विश्वको ध्यान कोरियाली प्रायद्वीपतिर तानिएको छ। दुई कोरियाका वरिष्ठ नेताहरूलाई यो अवस्थासम्म ल्याउन कसको हात रहेको थियो भन्ने कौतूहल विश्वभर फैलिएको छ। अमेरिका,
सधैं खोक्रो आश्वासन
गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर महाभूकम्प गएको बुधबार ठीक तीन वर्ष बितेको छ । समय पनि कत्ति छिटो बित्ने, थाहै नपाई तीन वर्ष बितेछ। तर काठमाडौं खाल्डोसहित भूकम्प प्रभावित धेरै जिल्लामा
सँधै खोक्रो आश्वासन
गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दू भएर महाभूकम्प गएको बुधवार ठिक तीन वर्ष वितेको छ । समय पनि कत्ति छिटो वित्ने, थाहै नपाई तीन वर्ष वितेछ । तर काठमाडौं खाल्डो सहित भूकम्प प्रभावित
कहिलेसम्म ढाँट्ने कामरेड ?
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र) बीच पार्टी एकता गर्ने भनेको पनि धेरै भइसकेको छ। निर्वाचनमा सँगै हल बँँधिएर जँँदा तत्कालै एकता गर्ने भने पनि आन्तरिक समस्या र विवादले एकताको
एमाले अध्यक्ष ओली पीएम हुनुअगावै उनलाई भारतले पटक–पटक बधाइ तथा शुभकामना दियो। आफ्ना समकक्षी हुने निधो भएपछि मोदीले ओलीलाई पटक–पटक टेलिफोनमा हाइ, हेल्लोसहित अन्य खै के–के कानेखुसी गरे। त्यतिले मात्रै
जुत्ता खुस्किएला हैं !
एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने, अर्कोलाई सम्मान गर्न नसक्नेहरू झन्डै ६ महिनायता एक भएर अघि बढ्ने दाबी गर्दै आएका छन्। तर, एक हुन सकेका छैनन्। अल्लारे उमेरका ‘गलफ्रेन्ड’ र ‘ब्वाइफ्रेन्ड’
मेलम्ची कुन दशैंमा ?
गत चैत २७ मा खानेपानी ल्याउने सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न अर्थात् ‘ब्रेक थ्रु’ भएपछि वर्षौैंदेखि काकाकुलझैं बनेका उपत्यकाबासी उत्साहित बनेका छन्। ‘जे होस्, अबचाहिँ पानी आउने भो है’ सुरुङ छिचोलिएपछि अधिकांश
बिद्यालय बाहिर केही बालबालिका कोही नहुन भन्दै सरकारले अभियाननै संचालन गरेको छ । प्रधानमन्त्री , मन्त्री सचिव देखि राजनीतिक दलका नेत सम्मले सामुदायिक बिद्यालयमा बिद्यार्थी भर्ना गर्ने अभियान संचालन गरेको
दुई मुखियाको नाटक
२ वाम १ ठाम यो नारा निकै आकर्षक छ। यो आकर्षणको केन्द्रमा नेपाली जनता पटक–पटक नपरेका होइनन्। जनतालाई मुर्ख बनाउदै आएका २ ठुला वामले पछिल्लो पटक नेपाली जनतालाई मुर्ख मात्र
जता हे¥यो उतै हुलका हुल मानिस छन्। सबैलाई भ्याइनभ्याई छ। वैशाखको महिना किताब पसलेलाई यस्तै हतारो। निजी विद्यालयलाई त भनिसाध्य छैन, मंसिर लागेको छ विद्यार्थी भिœयाउन। तँछाडमछाड छ, लुछाचुँडी छ,
देश–विदेशमा छरिएका नेपालीले आ–आफ्नै ढंग र शैलीले मातातीर्थ औंशी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन मनाएका छन्। यस अवसरमा आमाको सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना गर्दै मीठा–मीठा परिकार र गच्छेअनुसार नयाँ कपडा दिने
काठमाडौं उपत्यकामा विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम कहिलेकाहीँ निकै बाक्लै हुन्छन्। सानो कुरा चित्त नबुझोस् या ठूलो निस्कियो सडकमा, अनि शुरू गर्यो विरोध। सडकमा विरोध भएन भने सरकार र सम्बन्धित निकायले
चैत मसान्तलाई बिदाइ गरेपछि हरेक वर्ष नयाँ वर्ष दोहोरिनु नौलो कुरा भएन। यो मौकामा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै रमाइलो गर्नु, पिकनिक र फिल्म हेर्न जानु, मीठो मसिनो परिकार बनाउनु, खानु परम्पराजस्तै
रारा र आर्थिक समृद्धि
कहिले कालापत्थर त कहिले विकट जिल्ला मुगुको पर्यटकीय क्षेत्र रारामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा दिइएको छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धि भए पनि नभए पनि रारावासीको भने आर्थिक समृद्धि
छोरी अहिले चर्चामा बाउ उहिल्यै
एकताका कम्युनिस्ट दल निकटका भात्तृ संघ–संगठन मिस नेपाल जस्ता सुन्दरी प्रतियोगिताको चर्को विरोध गर्थे। पछिल्लो समयमा विरोध गर्नेहरू धेरैजसो संसद्का माननीय बन्न थालेका छन्। त्यही भएर होला हिजो–आज यस्तो प्रतियोगिताबारे
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याउने योजनासहित ५ वर्षका लागि विभिन्न विषय समेटिएको शैक्षिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरेछ। मार्गचित्रमा समेटिएका प्रायः सबै विषय गज्जबका छन्। विगतको पाठ, वर्तमानको धरातल र